कसरी आफ्नो अनुहारमा ग्राम आटा प्रयोग गर्ने - छाला
हरियाको पुरानो उपाय भारतमा स्किनकेयर उद्देश्यका लागि प्रयोग गरिन्छ। तपाईको आमा र हजुरआमाले गुजारा चलाउनुभएका घर-घर उपचारहरू तपाईसँग पहिल्यै आइसकेको हुन सक्छ चनेको पीठोको प्रयोग छालाको उज्यालोबाट शरीरको कपाल हटाउन सबैको लागि। खैर, यी घरेलु उपचारहरू प्रभावकारी साबित भएका छन् र त्यसैले आज पनि, यस भान्साको घटकलाई बेवास्ता गर्नु हुँदैन जब यो स्वस्थको लागि आउँदछ र घरमा सुरक्षित स्किनकेयर । चिसोको पीठो अनुहारको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ केहि साधारण DIY रेसिपीहरूको सहयोगमा। उनीहरू के हुन् पत्ता लगाउनुहोस्!
१ ग्राम आटा सूर्य ट्यान हटाउन मद्दत गर्न सक्छ
दुई ग्राम छालको साथ मृत छाला कोषहरू र अशुद्धता हटाउनुहोस्
3 चिसो मैदाको साथ एक्ने उपचार गर्नुहोस्
चार घरमा अनुहारको कपाल हटाउने ग्राम आटाको साथ सम्भव छ
।। ग्राम आटाको साथ अनुहारबाट अतिरिक्त सेबम हटाउनुहोस्
। ग्राम अटेको साथ तपाईंको अनुहारमा चमक थप्नुहोस्
।। बेसी छालाको ग्राम आटाको साथ व्यवहार गर्नुहोस्
।। मुछिएको दागहरू फ्याँक्न मिठो दाल
9 तैलीय छालाका प्रकारहरूले ग्राम फलो अनुहार प्याकबाट फाइदा लिन सक्छ
१० यस ग्राम आटा प्याकको साथ एक्ने-प्रोनको छाला ब्लेमिश निःशुल्क राख्नुहोस्
एघार FAQs ग्राम आटा
ग्राम आटा सूर्य ट्यान हटाउन मद्दत गर्न सक्छ
को चनेको पीठोमा लिनोलिक एसिडले महत्त्वपूर्ण रूपमा मद्दत गर्न सक्छ हटाउनुहोस् जब अन्य detanning अवयवहरूको साथ संयोजन। तपाईको अनुहारको लागि डिटान प्याक बनाउनका लागि दुई चम्चा मोटो आटा एक चम्मच निम्बूको रस र एक चम्मच दही मिक्स गर्नुहोस्। एक चुटकी हल्दी र नुन थप्नुहोस् र सबै सामग्रीहरू सँगै मिक्स गर्नुहोस् महीन टाँस्नुहोस्। तपाईंको अनुहार, घाँटी र ट्यानिंगबाट प्रभावित कुनै पनि क्षेत्रमा मास्क लागू गर्नुहोस्। प्याक छालामा सुक्नुहोस् र त्यसपछि चिसो पानीले कुल्नुहोस्।
सुझाव: नुहाउनु अघि दैनिक यो डिटान प्याक प्रयोग गर्नुहोस्।
ग्राम छालको साथ मृत छाला कोषहरू र अशुद्धता हटाउनुहोस्
एक सिर्जना गर्न पौष्टिक र exfoliating छाला स्क्रब मृत छाला कोषहरू र अशुद्धता हटाउन प्रभावी रूपमा तपाइँको अनुहार बाट, चनेको आटा एक काफी राम्रो विकल्प हो। दुई टेबल स्पून ग्राम आटाको एक चम्चा ग्राउन्ड ओट्स र एक टेबल स्पून कर्नफ्लोर र एक ड्यास दूध। सबै सामग्रीहरू सँगै मिस्नुहोस् एक श्टिक ग्रेनाइन्ट पेस्ट बनाउनको लागि र यसलाई तपाईंको अनुहार र शरीरमा स्क्रबको रूपमा प्रयोग गर्नुहोस्।
सुझाव: यससँग हप्तामा एक चोटि एक्सफोलिएट गर्नुहोस् DIY स्क्रब ।
चिसो मैदाको साथ एक्ने उपचार गर्नुहोस्
चनेको पीठमा जस्ता हुन्छ जुन अद्भुत एक्ने-फाइटिंग घटक हो। एक बनाउन एक्ने-फाइटिंग फेस प्याक चनेको पीठो संग, एक कचौरा मा एक चम्मच ग्राम आटा र एक चम्मच हल्दी जोड्नुहोस्। त्यसपछि, एक चम्मच मह र एक चम्मच नीबूको रस चनेको पीठो र हल्दीमा थप्नुहोस् र सबै सामग्रीहरू सँगै मिलाउनुहोस्। यो प्याक तपाईंको अनुहारमा लगाउनुहोस् र यसलाई १ 15 मिनेटको लागि छोड्नुहोस्। तातो पानी र सुख्खा संग यो कुल्ला।
सुझाव: क्रीमी फेस वाशको साथ अनुसरण गर्नुहोस् किनकि हल्दीले तपाईंको छाला पहेंलो देख्न सक्छ।
घरमा अनुहारको कपाल हटाउने ग्राम आटाको साथ सम्भव छ
त्यो सहि छ! चनेको पीठो मद्दतको लागि परिचित छ घरमा राम्रो अनुहारको कपाल हटाउनुहोस् सजिलो संग। चियाको पीठो र मेथी पाउडरको बराबर भागहरू एक कचौरामा थप्नुहोस् र पानीको थोपा जोड्नुहोस् जब सम्म तपाईं सुपर बाक्लो पेस्ट बनाउन सबै सामग्रीहरू मिक्स गर्न सक्नुहुन्न। यस पेस्टलाई ती क्षेत्रमा लागू गर्नुहोस् जसलाई कपाल हटाउन आवश्यक पर्दछ र सुकाउनुहोस्। एक पटक सुख्खा गरी आफ्नो औंलाहरू न्यानो पार्नुहोस् र क्षेत्रहरू सफा गर्नुहोस्। न्यानो पानीले धुनुहोस्।
सुझाव: देखिने परिणामहरू हेर्नका लागि हप्तामा दुई पटक यो एक पटक दोहोर्याउनुहोस्।
ग्राम आटाको साथ अनुहारबाट अतिरिक्त सेबम हटाउनुहोस्
चनेको पीठो एक राम्रो घटकको रूपमा काम गर्दछ साथमा छालाबाट अतिरिक्त सेबम हटाउनुहोस् अनलकिंग पोर्स । तपाईंको अनुहारमा प्रयोग गर्नको लागि, एक चम्चा दानाको एक चम्चा दाना मिक्स गर्नुहोस् र यसलाई तपाईंको अनुहारमा लगाउनुहोस्। यसलाई २० मिनेटसम्म छोड्नुहोस् र त्यसपछि चिसो पानीले कुल्ला।
सुझाव: कसरत सत्र पछि सफा छालामा यो प्याक प्रयोग गर्नुहोस्।
ग्राम अटेको साथ तपाईंको अनुहारमा चमक थप्नुहोस्
यदि तपाईंको अनुहार हल्का रंग बिग्रिएको छ भने, प्रयास गर्नुहोस् चनेको पीठो तपाईंको छालामा एक चमक थप्न । दुई चम्मच चनेको पीठोमा एक चम्मच पिसाइएको सुन्तलाको बोक्रा र मलाईको आधा चम्मच मिक्स गर्नुहोस्। यी सामग्रीहरू सँगै चलाएर पेस्ट बनाउनुहोस् र त्यसपछि तपाईंको अनुहार र घाँटीभरि यस अनुहारको मास्क लगाउनुहोस्। यसलाई २० मिनेटसम्म छोड्नुहोस्, र चिसो पानीले पखाल्दै बिस्तारै सफा गर्नुहोस्।
आँखा झिम्का घर उपचार अन्तर्गत
सुझाव: यस अनुहार प्याक हप्तामा तीन पटक स्वस्थ, चम्किला छालाका लागि प्रयोग गर्नुहोस्।
बेसी छालाको ग्राम आटाको साथ व्यवहार गर्नुहोस्
यदि तपाईंको छाला सुख्खा र अप्ठ्यारो महसुस छ भने, एक चम्मच चनेको पीठो एक चम्मच छाला-सुरक्षित जैतुनको तेल, तीन थोपा ताजा निम्बूको रस, र एक चम्मच महमा मिलाउने प्रयास गर्नुहोस्। कचौरामा सबै सामग्रीहरू मिलाउनुहोस् एउटा टाँस्नुहोस्। यो मिश्रण सबै अनुहारमा लागू गर्नुहोस् र पाँच मिनेट स्क्रबिंग पछि यसलाई कुल्ला गर्नुहोस्।
सुझाव: प्याट छाला सुक्खा र एक भिटामिन ई समृद्ध लागू गर्नुहोस् अनुहार मॉइश्चराइजर ।
मुछिएको दागहरू फ्याँक्न मिठो दाल
चनेको पीठो प्रयोग गर्न सकिन्छ एक्ने स्पट हटाउनुहोस् र छाला exfoliating द्वारा र दाग बिग्रेको सही गरेर। प्याक बनाउन जुन एक्ने दागहरू कम हुन्छ, एक चम्चा ग्राम चिसो आटा र दुई चम्चा ताजा दूधको साथ एक चुटकी हल्दी पाउडर एक चिल्लो पेस्ट सिर्जना गर्न। यस पेस्टलाई समान रूपमा छालामा लागू गर्नुहोस् र यसलाई सुक्खा नभएसम्म २ 25 मिनेटसम्म बस्नुहोस्। यो अनुहार प्याक गुनगुने पानीको साथ कुल्ला र नतिजाको आनन्द लिनुहोस्।
सुझाव: नियमित प्रयोगले एक्ने दाग पूर्ण रूपमा हटाउन मद्दत गर्दछ।
चित्रको साथ योग आसन प्रकार
तैलीय छालाका प्रकारहरूले ग्राम फलो अनुहार प्याकबाट फाइदा लिन सक्छ
तैली छालाले अतिरिक्त सिम्बु उत्पादन गर्छ जुन छिद्रहरू बन्द गर्दछ र छालालाई चिल्लो बनाउँछ। यसले छालामा धेरै गन्दाहरू पनि स .्कलन गर्दछ। ग्राम आटा फेस प्याक गर्न सक्छन् मद्दत छाला सफा गर्नुहोस् र सन्तुलन सेबम उत्पादन। एउटा अण्डा सेतोलाई हराउनुहोस् र यसलाई दुई सय चम्चा ग्राम आटा जोड्नुहोस् यसलाई सजिलै तेलदार छालाको फेस प्याकमा बनाउनको लागि। यो मास्क तपाईंको अनुहारमा लगाउनुहोस् र यसलाई १ 15 मिनेट बस्नुहोस्। यसलाई चिसो पानीले धोई दिनुहोस् र सुख्खा सुकाउनुहोस्।
सुझाव: यस प्याक प्रयोग गरेपछि जेल मॉश्चराइजरको साथ म्याश्चराइज गर्न नबिर्सनुहोस्।
यस ग्राम आटा प्याकको साथ एक्ने-प्रोनको छाला ब्लेमिश निःशुल्क राख्नुहोस्
यदि तपाईंको अनुहार स्थिर ब्रेकआउट्सको साथ ग्रस्त छ भने, तपाईंको स्किनकेयर रुटीनमा चनेको पीठो प्रयोग गरेर हेर्नुहोस्। तपाईंको छालालाई दाग मुक्त गर्न, छाला सफा गर्ने बनाउनुहोस् कि तपाई दिनहुँ चना आटा प्रयोग गरेर प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। मिक्सर ग्राइन्डरमा तीन टेबल स्पून चियाको पीठो, छ चम्मच मसूर, तीन टेबल स्पून मेथीको दाना, र तीन टुक्रा हल्दी जोड्नुहोस् र ती सबैलाई मिलाएर पाउडर क्लीन्सर प्राप्त गर्नुहोस्। यो पाउडर कन्टेनरमा भण्डार गर्नुहोस्। यो पाउडरको एक चम्मच कचौरामा लिनुहोस् र यसलाई केही दूध क्रीमसँग मिस्नुहोस् क्लीन्जिंग पेस्टको रूपमा। तपाईंको अनुहारमा पेस्ट लागू गर्नुहोस्, स्क्रब गर्नुहोस् र पानीले कुल्नुहोस्।
सुझाव: यो प्राकृतिक अनुहार क्लीन्जरले सेबम उत्पादनलाई नियन्त्रण गर्नेछ र एक्नेहरूलाई रोक्दछ।
FAQs ग्राम आटा
Q. के हरियाको पीठो सबै छालाका लागि उपयुक्त छ?
TO यो सामान्यतया हो, तर यदि तपाईंसँग संवेदनशील छाला छ भने, प्याच परीक्षण सँधै सिफारिस गरिन्छ। आदर्श रूपमा, चनेको पीठो सबै छालाका लागि विशेष गरी तेल र एक्ने-प्रवण छाला प्रकारका लागि राम्रोसँग काम गर्दछ।
Q. के चना आटा फेस प्याक दैनिक प्रयोग गर्न सकिन्छ?
TO दैनिक अनुहारको मास्क प्रयोग गर्नु त्यत्ति राम्रो उपाय होइन भने पनि सामग्री पूर्णतया ग्रामको पीठो जस्तो छ। यो किनभने तपाईंको छाला अत्यधिक संवेदनशील हुन सक्छ यदि तपाईं दैनिक फेस प्याक प्रयोग गर्नुहुन्छ र तिनीहरूलाई तपाईंको छालामा सुकाउन दिनुहोस्।
Q. कति पटक अनुहारमा चनेको पीठो प्रयोग गर्नु पर्छ?
TO अवयवहरूमा निर्भर गर्दै तपाईंले यससँग संयोजन गर्दै हुनुहुन्छ, हप्तामा दुई वा तीन पटक चिसोको पीठोको लागि अनुहार प्याकहरू र स्क्रबहरू स्वीकार्य छन् यदि तपाईंसँग तेल छाला छ भने। यदि तपाईंसँग तेल छाला छैन भने, हप्तामा एक पटक मात्र पर्याप्त हुन्छ। चनेको पीठो पनि सफा गर्ने एजेन्टको रूपमा काम गर्दछ, त्यसैले चनेको पीठोको साथ पाउडर फेस वाश दैनिक रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
यो पनि पढ्नुहोस्: सौन्दर्य आहार: चम्किलो छालाका लागि Vitamin भिटामिन सी रिच फलहरू
कसरी रूसी र कपाल झर्ने कम गर्न
बेकिंग सोडा प्रयोग सौंदर्य सल्लाहहरू
स्थायी रूपमा घरबाट अनुहारबाट कपाल कसरी हटाउने
कसरी डबल चिनबाट छुटकारा पाउने
सबै भन्दा राम्रो व्यायाम पेट को बोसो जलाउन
कपाल झर्नेको लागि उत्तम उपाय
घरमा स्वस्थ कपालको वृद्धिको लागि सुझावहरू